Kusoo iibso Instagram Like '▷ ➡️ Followers ▷ ➡️
Iibso jaceylka dhabta ah barta Instagram
December 14, 2018 0 comments 987
Instagram-ka waa midka ugu caansan uguna dambeeyay ee shabakadaha bulshada maanta. La yaab maahan, waxay noqotay mid ka mid ah bandhigyada waaweyn ee sumadaha sumcadda leh. Qof kastaa wuxuu doonayaa inuu xayeysiisto wax soo saarkooda iyo adeegyadooda halkan oo uu gaaro tirada ugu badan ee isticmaaleyaasha. Laakiin taas, waa inaad leedahay a tiro badan oo raacsan oo aad u jecel jecel daabacaadaha. Xiga dambe, inbadan oo shabakadan kamid ah waxay rabaan inay iibsadaan waxay jecel yihiin inay muujiyaan raacsan is dhex gal
Waxyaalaha la jecel yahay daabacaadaha ama muuqaallada fiidiyowga ee Instagram waxay muujinayaan inay leeyihiin aqbalaad weyn ka dhex jirta kuwa raacsan. Tan waxaa qabtay algorithms-ka isla markaana waxay ka dhigtaa waxa ku jira kuwa ugu caansan shabakadda. Tani waxay keenaysaa kordhin tirada kuwa raacsan daabacaaduna waxay gaari kartaa dad badan oo kale waqti ka yar.
Sawirada iyo fiidiyowyada ay soo xushay Instagram si ay uga soo muuqdaan meelaha ugu caansan uguna caansan ee shabakada waa kuwa soo bandhigaya tiro badan oo jecel dhab ah. Tani waa sababta oo ah lahaanshaha waxyaabo badan oo daabacan ah waxay siisaa xoogaa kalsooni ah koonto. Tan ayaa dadku u fahmaan inay yihiin fikradaha isku halaynta
Sida loo iibsado jecellada dhabta ah ee Instagram
Sababtaas awgeed ayaa ah Noocyo badan ama astaamo shaqsiyeed ayaa isku raacay inay iibsadaan waxyaabaha jecel boggooda internetka ee Instagram. Si kastaba ha noqotee, waa algorithms-ka shabakadan bulshada ee lagu ogaan karo ficilkan, waana sababtaas sababta ugu wanaagsan in loo iibsado waxyaabaha la jecel yahay oo aan laga iibsan bots ama xisaab been abuur ah.
Dareenkaas, waxaa jira shabakado badan oo shabakadda ah oo aad ka iibsan karto jecellada dhabta ah ee instagram. Sida ugu habboon, xulo meel ina siisa waayo aragnimo ku filan Intaa waxaa dheer dammaanad qaadista tayada astaannada kuwa ay kuwa jecel ay gaari doonaan qoraalkeenna.
Si aan u iibsano kuwa jecel waxaan u baahan nahay kaliya akoon Instagram ah, maadaama aan la dirin raacsan ama jecel yahay magacyada gaarka ah. Marka ku xigta, waa inaad tagtaa qaar ka mid ah websaydhyadaan oo aad raacdaa tilmaamaha. Waxay kuxirantahay tirada jecel inay iibsadaan, qiimuhu wuxuu noqon doonaa mid ama mid kale. Waqti yar gudahood qoraaladaada waxay heli doontaa inta aad jeceshahay oo aad soo heshay.
Way iska cadahay in dad badani tixgelin doonaan in iibsashada waxyaabaha la jecel yahay aysan ahayn wax faaido leh. Si kastaba ha noqotee, ku dhawaad ​​dhammaan magacyada waaweyn ayaa sidaas sameeya oo leh natiijooyin ku qanacsan. Si kastaba ha noqotee, waa lagama maarmaan in la sii wado u soo gelinta nuxurka tayada leh astaanteenna, maxaa yeelay haddii kale iibsashada waxyaabaha la jeclaado waxay noqon laheyd wax aan micno weyn yeelan doonin.
Gaaban, Iibsashada jacellada dhabta ah Instagram-ka waa dhaqan aad uga badan inta aan qiyaasi karno. Saameeyayaasha iyo sumadaha iyo shirkadaha labadaba waxay u adeegsadaan qaabkan inay isku dayaan inay helaan aragti weyn oo ay koraan tirada kuwa raacsan. Maalgelin yar waxaan bilaabi karnaa inaan aragno natiijooyinka waqti aad u yar.
Istaraatiijiyad, sidaa darteed, dhakhso, dhaqaale, sahlan oo wax ku ool ah si loo kordhiyo meelaynta koonteenna shabakadda bulshada. In kasta oo aan sidoo kale awoodno ka iibsato kuwa raacsan barta Instagram Hadeena hadafkayagu yahay inaan gaarno si dhakhso badan.
Sida loo helo kuwa raacsan dhaqsaha badan shabakadahayaga bulshada
Iibso jeceshaha tooska ah barta Instagram